China PSA oxygen concentrator / Psa Nitrogen plant amidy Psa Nitrogen Generator mpanamboatra sy mpamatsy | OR
Mpitrandraka oksizenina PSA / Plant Nitrogen Psa amidy Psa Nitrogen Generator
Oksizenina dia entona tena ilaina amin'ny famelomana ny fiainana ety an-tany, manokana ao amin'ny hopitaly, ny oksizena ara-pahasalamana dia mitana andraikitra lehibe tokoa amin'ny famonjena ny marary.
Ny ETR PSA Medical Oxygen Plant dia afaka mamokatra oksizenina ara-pahasalamana avy amin'ny rivotra mivantana. ETR Medical Oxygen Plant dia misy Atlas Copco air compressor, SMC fanamainana sy sivana, PSA oxygen oxygen, buffer tank, cylinder manifold system. Ny kabinetra fanaraha-maso HMI sy ny rafitra fanaraha-maso APP dia manohana ny fanaraha-maso an-tserasera sy lavitra.
Ny rivotra voafintina dia diovina amin'ny alàlan'ny fanamainana rivotra sy sivana mankany amin'ny ambaratonga iray hiasa miaraka amin'ny generator lehibe. Ny buffer air dia ampidirina ho an'ny famatsian-tsiranoka azo avy amin'ny rivotra voafehy ka hampihena ny fiovaovan'ny loharanon-karena voafehy. Ny generator dia mamokatra oksizenina miaraka amin'ny teknolojia PSA (adsorption swing swing), izay fomba famokarana oksizena voaporofo ara-potoana. Oksizenina amin'ny fahadiovana tadiavina amin'ny 93% ± 3% dia atolotra any amin'ny tanka buffer oxygen ho an'ny famatsiana entona entona vokatra. Ny oksizenina ao anaty tanky buffer dia voatazona amin'ny tsindry 4bar. Miaraka amin'ny booster oxygen, ny oxygen oxygen dia mety ho feno varingarina miaraka amin'ny tsindry 150bar.
Namboarina tamin'ny alàlan'ny haitao mandroso Pressure Swing Adsorption ny orinasa mpamokatra oxygen oxygen. Araka ny fantatry ny besinimaro, ny oksizenina dia manodidina ny 20-21% amin'ny rivotra iainana. Ny mpamokatra oksizenina PSA dia nampiasa sieves molekiola Zeolite hampisaraka ny oksizena sy ny rivotra. Oksizena manana fahadiovana avo lenta no aterina, fa ny azota entin'ny sivana molekiola kosa dia averina any amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody.
Ny fizotran'ny adsorption pressure swing (PSA) dia alàlan'ny sambo roa feno sivana molekiola sy alumina mihetsika. Ny rivotra voafintina dia mandalo amin'ny sambo iray amin'ny 30 degre C ary ny oxygen dia novokarina ho entona vokatra. Ny nitroka dia esorina ho toy ny entona fandosirana miverina amin'ny atmosfera. Rehefa feno ny fandriana sivana molekiola dia avadika amin'ny fandriana hafa ny fizotrany amin'ny valves mandeha ho azy ho an'ny famokarana oksizenina. Vita izany rehefa mamela ny fandriana mahavoky hiaina fiterahana indray amin'ny alàlan'ny famoizam-po sy fanadiovana ny tsindry amin'ny atmosfera. Sambo roa no miasa mifandimby amin'ny famokarana oksizenina sy ny famerenana amin'ny laoniny izay mamela ny oxygen ho azo ampiasaina.
Fampiharana zavamaniry PSA
Ny zavamaniry mpanamboatra oksizenina PSA dia ampiasaina amin'ny indostria maro, anisan'izany:
Indostrian'ny taratasy sy pulp ho an'ny famotsiana oxygène ary fanala baraka an'i Oxy
Indostria fitaratra ho an'ny fampiroboroboana ny lafaoro
Indostrian'ny metalyurgie ho an'ny fampiroboroboana ny lafaoro ny lafaoro
Indostria simika ho an'ny fanehoan-kevitra momba ny okididra sy ho an'ny mpandoro
Fitrandrahana entona, fanapahana ary famonoana vy
Previous: Fifantohana avo lenta amin'ny indostrialy Psa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Manaraka: Industrial Scale PSA Oxygen Concentrator Oxygène famokarana oksizena miaraka amin'ny fanamarinana